Imizuzwana emi-4 noma iBust | Martech Zone
Uyazikhumbula izinsuku zokulala nemodemu yakho ikhamuluka ulanda amakhasi ukuze uzibuke ngakusasa ekuseni? Ngicabanga ukuthi lezo zinsuku zisemuva kakhulu kithi. UJohn Chow uthumele inothi kulolu cwaningo ekhishwe yiJupiter ethi iningi labathengi abakwi-inthanethi bazotakula uma ikhasi lakho lingalayishi ngemizuzwana emi-4 noma ngaphansi.
Ngokuya ngempendulo yabathengi be-inthanethi abangu-1,058 abahlolwa phakathi nengxenye yokuqala ka-2006, iJupiterResearch inikeza ukuhlaziywa okulandelayo:
Imiphumela kumthengisi oku-intanethi onesizinda sokwenza okungaphansi kwesayithi lakhe kufaka phakathi ukuncipha kokuthakazelelwa, ukubona okungalungile komkhiqizo, futhi, okubaluleke kakhulu, ukulahleka okukhulu ekuthengisweni konke.
Ukwethembeka ku-inthanethi kwe-shopper kuncike ekulayisheni ikhasi ngokushesha, ikakhulukazi kubathengi abasebenzisa imali eningi nalabo abanesikhundla esiphakeme.
I-JupiterResearch incoma ukuthi abathengisi benze yonke imizamo yokugcina ukunikezwa kwekhasi kungabi ngaphezu kwemizuzwana emine.
Okutholakele okungeziwe kulo mbiko kukhombisa ukuthi ngaphezu kwengxenye eyodwa kwezintathu zabathengi abanokuhlangenwe nakho okubi bashiye ngokuphelele isiza, kuyilapho amaphesenti angama-75 kungenzeka ukuthi angaphinde athenge kuleso siza. Le miphumela ikhombisa ukuthi iwebhusayithi engenzi kahle ingalimaza isithunzi senkampani; ngokocwaningo, cishe amaphesenti angama-30 wamakhasimende angenelisekanga azokwakha umbono ongemuhle wenkampani noma atshele abangane nemindeni yawo ngalokhu okwenzekile.
Lokhu kungaba umthetho omuhle wesithupha wanoma yiluphi uhlelo lokusebenza. Imizuzwana engu-4 ingaba ngumkhawulo omkhulu - ngaphandle kwedatha eningi nokuhlanganiswa kwedatha enkulu, ikhasi lesibili eli-4 lingafuna ukuba yisikhathi sakho sokulayisha esiphezulu sekhasi ngaphambi kokuthatha isinqumo sokwengeza noma sokunqamula ukusebenza.
Uma uyiklayenti, lokhu futhi kungaba ukulindela ofuna ukusetha nomthengisi wakho. Anginaso isiqiniseko sokuthi lo mthetho ungasetshenziswa kuma-verticals, kepha ngiyaqiniseka impela ukuthi ukuphelelwa yisineke ukubekezela, kungaba isitolo esiku-inthanethi noma uhlelo oluku-inthanethi.
Tags: 4 imizuzwanaisikhathi sokunakaukwaneliseka kwamakhasimendee-commerceezokuhweba ngekhompyuthaukulahlekelwa ekuthengiseniumthengisi onlineidumelaumthengisishopper ukwethembeka